Solifara Mainty, 2-Amino-4-Nitrophenol, solifara mainty BR - Foring
Solifara Mainty BR
Solifara Mainty B
Solifara mainty solika BR
Ny orinasa dia manana fomba teknolojia avo lenta hamokarana Sulfur Black B, Sulfur Black BR, 2, 4-Dinitrochlorobenzene ary 2-Amino-4-nitrophenol.
Flake na voamainty mainty misy tanjaka hafa. Ny fandokoana matetika amin'ny landihazo, viscose, vinylon ary taratasy.
Alokaloka hafa miaraka amin'ny Sulfur Black BR.
Kavina mavo mavo mavo. Ho an'ny famokarana loko, famonoana bibikely ary fanafody mpanelanelana.
Kristaly mavo, vovoka. Ho an'ny famokarana loko sy fanafody mpanelanelana. Ampiasaina amin'ny asidra volontany RH, asidra maitso 3G, mainty BL, BRL, BGL.
Foring Import & Export Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2004. Nahazo ny orinasa ISO 9001: 2006 sy ISO 14000 ny orinasanay. Nanangona traikefa manan-karena amin'ny fanondranana vokatra simika simika tsara izahay. Miorina amin'ny zavamaniry matanjaka anay, afaka manohana ny solifara mainty sy ny mpanelanelana amin'ny tsena any ivelany isika.
Ny fananana fifadian-kanina tsara, ny fahombiazan'ny vidiny ary ny fanamorana ny fampiharana amin'ny toe-javatra fanodinana isan-karazany, maharitra sy mitohy ary mahatonga azy io ho iray amin'ny loko malaza indrindra.
Ny fandokoana matetika amin'ny landihazo, viscose, vinylon ary taratasy.
Ny loko faha-38 + Chem Bangladesh Expo 2019
4 Sep, 2019 hatramin'ny 7 Sep, 2019 ao amin'ny International Convention City Bashundhara, International Convention City Bashundhara, Purbachal Express Hwy, Dhaka, Bangladesh. Ny CEMS-Global USA's International Dye + Chem series of Exhibitions 'dia nahatratra ny ...
Colour & Chem Pakistan EXPO
Ny Color & Chem Expo dia hetsika manokana hanomezana tolotra feno sy avo lenta ho an'ny akora simika, loko ary indostria mpiara-miasa hametraka marika, hampivelatra tsena vaovao ary handroahana ny varotra. Color & Chem Expo 2019 dia manome fomba fijery amin'ny ...
CPhI dia hetsika pharmaceutika efa niorina miaraka amin'ny traikefa efa 30 taona mahery amin'ny fanangonana ireo mpivezivezy sy mpihira ao amin'ny pharma. Anarana efa niorina ao amin'ny indostria, CPhI Worldwide dia manasongadina ny kalandrie pharma manambatra pha ...
Address: 1211 ShangDe Plaza, No.8 Kangle Street, Shijiazhuang, Sina